IVimeo izuza Ukwabelana ngeNtengiso yeVidiyo: Ukugcwala kwabantu abangama-269% | Martech Zone
Kutshanje, bendisenza uphando oluninzi kwividiyo yabathengi bam. Ividiyo iba yinto enkulu kumava akwi-Intanethi; Ngapha koko, kukho ithuba elihle lokuba indawo yakho izakutsitywa ngokupheleleyo yipesenti yeendwendwe ngaphandle ubonelela ngevidiyo. Iifowuni ezintsha ze-smart zikwenzelwe ividiyo kunye nokubukela kuyakhwaza.
I-YouTube sele iyinjini yokukhangela yesibini enkulu kwi-Intanethi. Kodwa amanye amaqonga evidiyo aqhuba kakuhle, kunye nokukhula kwamanani aphindwe kabini kunyaka wokugcwala ngaphezu konyaka. Ukude, nangona kunjalo, bedlala wenze imitsi emikhulu… wagqwesa okhuphisana nabo bobabini abakhulu - Imetacafe kwaye Dailymotion. Nazi izibalo zamva nje ezivela Khuphiswano:
Ividiyo nayo iba yinto eneenjini zokukhangela. UGoogle uhlala efafaza iziphumo zevidiyo zamva nje, kunye nemifanekiso, kwiphepha lesiphumo senjini yokukhangela yesiqhelo. Amaqonga aya esiba bhetyebhetye… Uvavanyo lwamva nje lwe-YouTube kuvunyelwe iphepha lokufika kwesiko kunye nokunxibelelana komsebenzisi!
Ngaphandle kwamandla e-SEO, ividiyo ilunge kakhulu ukuba ingadlula ngenxa yezizathu ezibini zokuthengisa:
Amandla evidiyo okuchaza iinkqubo ezinzima kakhulu okanye unxibelelwano ngokulula. Kutheni uzama ukucacisa ngemifanekiso kunye nokubhaliweyo xa unokwenza ividiyo yesibini engama-30 eyenza umbono ongenasiphako.
Ukukwazi kweVidiyo ukunxibelelana buqu kunye ngempumelelo nabaphulaphuli. Ukuba umfanekiso uxabisa amagama aliwaka, ividiyo ixabisa izigidi.
Ndiqinisekile ukuba iindleko eziphantsi zeVimeo, umgangatho ophezulu kunye neminikelo eyomeleleyo iyakhawulezisa ukukhula kwayo. Ukubamba ishishini ngu $ 59 ngonyaka nge5Gb yokulayishwa kuvunyelwe ngeveki. Indawo ivumela ukudlala ngokuchazwa okuphezulu kubahlalutyi kunye namaphepha amajelo ayilwe kakuhle. Kutshanje sibeke i DK New Media Isiteshi seVidiyo ibukhali intle. Bavumela amakhonkco ekupheleni kweevidiyo zakho kunye nokususwa kwelogo yabo xa uyifaka.
I-goliath iyaqhubeka ukuba yi-YouTube… ke ukuba uzama ngokungqongqo ukufikelela kubantu abaninzi, kuya kufuneka udlale eyadini yabo. Sukubala abanye ngaphandle komdlalo okwangoku, nangona kunjalo! Maninzi amathuba.
tags: AccentureInkcazo yebhlogCatalystnqakraza apha ukuze ulandeleubuntu be-facebooksiteNobuhloboilaptop yevidiyoezibonwayo
Ividiyo: IMicrosoft yeWindows Phone 7 yokuQala ukuHlola
Yeka ukufihla kubakhenkethi bakho